Hilux Revo – Interior | Toyota Myanmar – Together Tomorrow Toyota
Hilux Revo – Interior
Noise-absorbing, Noise-insulating and Vibration-damping Materials
နေရာအမြောက်အများတွင် သီးသန့်ဖြစ်သော အနက်ရောင်သတ္တုအလှဆင်မှုများဖြင့် ကားအတွင်းခန်းကိုဆင်ယင်ထားပြီးအပေါက်ဖောက်ထားသည့် သားရေထိုင်ခုံများလည်း တပ်ဆင်ပါရှိသည်။ (G Grade Premium သာ)
ကားရှေ့ ခန်း နှင့် နောက်ခန်းရှိတံခါးဘောင်များတွင် ရေဗူး၊ရေခွက် စသည့် ပစ္စည်းများထားရှိရန် နေရာလွတ်များပါရှိသည်။
2. Cup holder/Storage for small items
စမတ်ကီးကို ယူဆောင်လာသည့်အခါ သင်သည် ခလုတ်ကို ရိုးရှင်းစွာ နှိပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် တံခါးကို လော့ခ်ချ/လော့ခ်ဖွင့်လုပ်ခြင်းနှင့် အင်ဂျင်ကို စက်နှိုး/စက်သတ်ခြင်းတို့ လုပ်
ဆောင်နိုင်ပါသည်။ (G Grade)
မြင်ကွင်းကို သေချာသိနိုင်စေရန် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော သွင်ပြင်ကို ပေးစွမ်း
နိုင်သည့် အဖြူရောင် အလင်းတန်းကို မီတာ ထဲတွင် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ (G Grade Premium)
စပီကာများအား ထိုင်ခုံအားလုံးတွင် သာလွန်ကောင်းမွန်သည့်အသံများကို ဖြည့်စွမ်း ပေးရန်အတွက် နည်းဗျူဟာကျကျ နေရာချထားပါသည်။ ကြီးမားသည့် ထိတွေ့စခရင် ဖန်သားပြင်သည် ခလုတ်များနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများကို လွယ်ကူစွာ ထိတွေ့ လုပ်ဆောင် နိုင်စေပါသည်။ (G grade သာ)
အားကောင်းသည့်စွမ်းဆောင်ရည်အား စွမ်းအင်လုံလောက်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ အနောက်ဘက်ထိုင်ခုံများရှိ လွတ်လပ်သောအပေါက်ငယ်များ သည် လိုက်ပါစီးနင်းသူအားလုံးကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
(G grade သာ)
သီးသန့်ဒီဇိုင်းပုံစံပြန်လည်ပြုလုပ်ထားသော double cabအရှေ့ဘက်ထိုင်ခုံများသည်ခိုင် ခံ့သည့်အသွင်အပြင်ကိုသာမက လုံလောက်သည့်ပံ့ပိုးမှုကိုပါ ဖြည့်ဆည်းပေးပါ သည်။ ထို့အပြင်၊ G Grade Premium မော်ဒယ်များတွင် အပေါက်ဖောက်ထားသည့် သားရေထိုင်ခုံများ တပ်ဆင်ပါရှိပါသည်။
ခရီးသည်များစိတ်ကျေနပ်မှုရှိစေရန် HILUX REVO ၏ ကားနောက်ခန်းထိုင်ခုံနေရာတွင် ကျယ်ဝန်းသောခြေခင်း၊အလယ်တွင်လက်တင်ခုံနှင့် လေအေးပေးစက်များထည့်သွင်း ထားပါသည်။
ကားနောက်ခန်းတွင် ခရီးသည်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများပိုမိုဝင်ဆန့် စေရန်သီးခြားခွဲထား သော60:40ထိုင်ခုံကူရှင်များကိုနောက်သို့ ခေါက်တင်ထားနိုင်သည်။ ထိုင်ခုံများအောက် တွင် ပစ္စည်းများထားရှိရန်နေရာလွတ်များပါရှိပြီးကား၏အလယ်ဗဟိုရှိ လက်တင်နေရာ တွင် ပစ္စည်းထည့်ရန် နေရာများပါရှိသည်။.
အသံကာ(insulating)ပစ္စည်းများ၊ တုန်ခါမှုလျော့ပါးစေသည့် ပစ္စည်းများကိုကား၏
ကြမ်းခင်း၊ အင်ဂျင် ခန်းများတွင် နည်းစနစ်ကျကျ ထည့်သွင်းထားသောကြောင့်
ခရီးသည်များအဖို့ဆိတ်ငြိမ်မှုကိုခံစားရရှိစေနိုင်ပါသည်။
Big, strong and stylish, the Hilux sets the standards foranew generation. In both work and leisure, its advanced capabilities and features will help expand your lifestyle.
နေရာအမြောက်အများတွင် သီးသန့်ဖြစ်သောအနက် ရောင် သတ္တုအလှဆင်မှုများဖြင့်ကားအတွင်းခန်းကို ဆင်ယင်ထား ပြီးအပေါက်ဖောက်ထားသည့် သားရေထိုင်ခုံများလည်း တပ်ဆင်ပါရှိသည်။ (G Grade Premium သာ)
ကားရှေ့ ခန်း နှင့် နောက်ခန်းရှိတံခါးဘောင်များတွင်
ရေဗူး ၊ရေခွက်စသည့် ပစ္စည်းများထားရှိရန်နေရာလွတ်များ ပါ ရှိသည်။
စမတ်ကီးကို ယူဆောင်လာသည့်အခါ သင်သည် ခလုတ်ကို ရိုးရှင်းစွာ နှိပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် တံခါးကို လော့ခ်ချ/လော့ခ်ဖွင့်လုပ်ခြင်းနှင့် အင်ဂျင်ကို စက်နှိုး/စက်သတ်ခြင်းတို့ လုပ် ဆောင်နိုင်ပါသည်။ (G Grade)
မြင်ကွင်းကို သေချာသိနိုင်စေရန် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော သွင်ပြင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့် အဖြူရောင် အလင်းတန်းကို မီတာ ထဲတွင် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ (G Grade Premium)
စပီကာများအားထိုင်ခုံအားလုံးတွင်သာလွန်ကောင်းမွန်သည့်အသံများကို ဖြည့်စွမ်းပေးရန်အတွက် နည်းဗျူဟာကျကျ နေရာချထားပါသည်။ ကြီးမားသည့် ထိ တွေ့စခရင်ဖန်သားပြင်သည် ခလုတ်များနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများကို လွယ်ကူစွာထိတွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ (G grade သာ)
သည်။ အနောက်ဘက်ထိုင်ခုံများရှိ လွတ်လပ်သောအ
ပေါက်ငယ်များသည် လိုက်ပါစီးနင်းသူအားလုံးကို သက် တောင့်သက်သာရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
သီးသန့်ဒီဇိုင်းပုံစံပြန်လည်ပြုလုပ်ထားသော double cab အရှေ့ဘက်ထိုင်ခုံများသည် ခိုင်ခံ့သည့်အသွင်
အပြင်ကိုသာမက လုံလောက်သည့်ပံ့ပိုးမှုကိုပါ ဖြည့် ဆည်းပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ G Grade Premium
မော်ဒယ်များတွင် အပေါက်ဖောက်ထားသည့်သားရေထိုင်ခုံများ တပ်ဆင်ပါရှိပါသည်။
ခရီးသည်များစိတ်ကျေနပ်မှုရှိစေရန် HILUX REVO၏ ကားနောက်ခန်းထိုင်ခုံနေရာတွင် ကျယ်ဝန်းသောခြေ ခင်း၊အလယ်တွင်လက်တင်ခုံနှင့် လေအေးပေးစက်များ
ကားနောက်ခန်းတွင် ခရီးသည်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများပိုမိုဝင်ဆန့် စေရန်သီးခြားခွဲထားသော60:40ထိုင်ခုံကူရှင်များကိုနောက်သို့ ခေါက်တင်ထားနိုင်သည်။ ထိုင်ခုံများ အောက်တွင်ပစ္စည်းများထားရှိရန်နေရာလွတ်များပါရှိပြီးကား၏အလယ်ဗဟိုရှိ လက်တင်နေရာတွင်ပစ္စည်း ထည့်ရန် နေရာများပါရှိသည်။
အသံကာ(insulating)ပစ္စည်းများ၊ တုန်ခါမှုလျော့ပါးစေသည့် ပစ္စည်းများကိုကား၏ကြမ်းခင်း၊ အင်ဂျင် ခန်းများတွင် နည်းစနစ်ကျကျ ထည့်သွင်းထားသောကြောင့်
ခရီးသည်များအဖို့ဆိတ်ငြိမ်မှုကိုခံစားရရှိစေနိုင်ပါ သည်။